ပီရူးနိုင်ငံမှ စိတ်ကူးအိပ်မက်များ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာပြီ ပရိုမိုးရှင်း၏ ဒီဇင်ဘာလအတွက်ဆုရှင် Daniel Alejandro Collazos Rivas အား ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်းပါ!
Daniel၏ အဖြစ်အပျက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ အသည်းနှလုံးအား ဖမ်းစားသွားနိုင်ခဲ့ပါသည်. အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူ့အနေနှင့် ပိုကောင်းသောကမ္ဘာတစ်ခုအား ဖန်တီးလိုသော်လည်း အတားအဆီးအချို့ကြောင့် ခက်ခဲနေခဲ့ရပါသည်. တစ်နေ့ တက္ကသိုလ်​မှ အိမ်သို့ပြန်လာခဲ့ရာလမ်းတွင် အလုခံခဲ့ရပြီး သူပညာရေးအထောက်အထူများအားလုံးပါ လုယက်သူများလက်ထဲ ပါသွားခဲ့ပါသည်. သူ့မိသားစုမှာ အသစ်ဝယ်ပေးနိုင်ရန်အထိ မတတ်နိုင်ခဲ့သော်လည်း ကံကောင်းစွာဖြင့်ပင် မမျှော်လင့်ထားသောနေရာတစ်ခုမှ အကူအညီရရှိခဲ့ပါသည်.
Danielရဲ့အမျိုးတစ်ဦးက FBSရဲ့ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ဝင်ရောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အတွက် အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပြီ! ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့သားများသည် ယခု ဆုရှင်နေထိုင်ရာနှင့် အလွန်ဝေးကွာသော တစ်နေရာ နှင်းများနှင့်အေးခဲနေသည့် ရုရှားနိုင်ငံမှနေ၍ အကူအညီလိုအပ်နေသူများ၏ ပြောစကားများကို ဂရုတစိုက်နှင့် နှလုံးသားနှင့် နားစွင့်နေခဲ့ကာ ကူညီပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်. ယခုဆိုလျှင် Daniel သည် လက်တော့ပ်အသစ်တစ်လုံးကို ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ပျော်ရွှင်စွာဖြင့် ဆက်လက်ပညာသင်ကြားနိုင်ပြီဖြစ်သည်. အနာဂတ်တွင် နိုင်ငံအကျိုးသယ်ပိုးနိုင်သည့် လူတော်တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်မည်ဟု FBSအဖွဲ့မှ ရိုးသားစွာဖြင့် မျှော်လင့်မိပါသည်.
မှတ်တမ်း ဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်လိုက်ပါ.